The 100 (2014) Season4Complete – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
4 Seasons 13 Episodes
The 100 (2014) Season4Complete
TMDb: 7.7/10 4560 votes
Original nameThe 100
Created byJason Rothenberg
StarringAdina Porter, Bob Morley, Chuku Modu, Eliza Taylor, Ivana Miličević, Jarod Joseph, JR Bourne, Lindsey Morgan, Lola Flanery, Marie Avgeropoulos, Richard Harmon, Shannon Kook, Shelby Flannery, Tasya Teles, Tati Gabrielle
Synopsis of The 100 (2014) Season4Complete
Season3အဆုံးမှာ အယျလီကို အနိုငျယူလိုကျနိုငျပမေဲ့ ၆လအတှငျးကမ်ဘာပကျြစီးတော့မှာ သိနတေဲ့ ကလကျတဈယောကျ ဘာတှထေပျရငျဆိုငျရမလဲ ? လူမြိုးစုအားပွိုငျမူ့တှကေကော ဘယျလိုတှဆေကျဖွဈလာမလဲ ? The 100 ရဲ့ထုံးစဲအတိုငျးစိတျဝငျစားဖို့ကောငျးတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို Blu-ray 1080p Quality နဲ့အပွညျ့အ၀ခံစားကွညျ့ပါအုံး
Season3အဆုံးမှာ အယ်လီကို အနိုင်ယူလိုက်နိုင်ပေမဲ့ ၆လအတွင်းကမ္ဘာပျက်စီးတော့မှာ သိနေတဲ့ ကလက်တစ်ယောက် ဘာတွေထပ်ရင်ဆိုင်ရမလဲ ? လူမျိုးစုအားပြိုင်မူ့တွေကကော ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ ? The 100 ရဲ့ထုံးစဲအတိုင်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို Blu-ray 1080p Quality နဲ့အပြည့်အ၀ခံစားကြည့်ပါအုံး
Quality – Blu-ray 1080p
YuuDrive , SharePw , Storage M-Sub, Server M-File
YuuDrive , SharePw , Server M-File
Airs OnThe CW
ProductionAlloy Entertainment, Bonanza Productions, CBS Television Studios, Warner Bros. Television
Firt air date2014-03-19
Last air date2020-09-30
Episode runtime43 min
Home PageThe 100 (2014) Season4Complete
Money Heist (2017) Season 1 Complete
The Originals Season 1 Complete
SKY Castle (2018) Complete
The Bride of the Water God (2017) Complete
Kingdom (2019) Season2Complete
Item (2019) အစအဆုံး Complete
Times (2021) Complete
Pinocchio (2014) Complete